Shiinaha oo diiday inuu isticmaalo erayga 'Argagixiso' - BBC News Somali
Shiinaha oo diiday inuu isticmaalo erayga 'Argagixiso'
Sannadkii 1999-kii ayaa wadaadkan laga soo daayay Hindiya
Dowladda Shiinaha ayaa hor istaagtay isku day lagu doonayay in argagxiso loogu yeero hoggaamiyaha koox ka dambeysay weerar sabab u noqon rabay in uu dagaal dhex maro dalalka Hindiya iyo Pakistan.
Ninkan oo lagu magacaabo Masood Azhar ayaa madax u ah kooxda Jayshu Muxammad, taasoo bishii lasoo dhaafay fulisay qarax ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo ku sugnaa qeybta ay Hindiya ka maamusho gobolka Kashmiir.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa laga codsaday in Masood Azhar loo aqoonsado argagixiso isla markaana lagu soo rogo xayiraado isugu jira dhinaca dhaqaalaha, socdaalka iyo hubka.
Isbarbar dhigga awoodda Hindiya iyo Pakistan
Hase ahaatee Shiinaha ayaa codsaday in dib loo dhigo arrintaas, si loo siiyo waqti dheeraad ah oo ay uga soo fikiraan go'aankaas.
Dib u dhigistan ayaa qaadan karta muddo 9 bilood ah, waana markii afaraad ee Shiinaha, oo xulafo dhow la ah Pakistan, uu hor istaago isku day lagu doonayay in Masood Azhar loogu aqoonsado qof argagixiso ah.
Dowladda Hindiya ayaa u mahad celisay dalalka ku raacay soo jeedinteeda, iyadoo safka hore ku xustay waddamada Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska.
Bayaan kasoo baxay xukuumadda Delhi ayaa lagu yidhi: "Waan sii wadi doonnaaaa dadaallada ku aaddan sidii caddaaladda ay u wajihi lahaayeen hoggaamiyeyaasha kooxaha argagixisada ah ee fuliya weerarrada lagu qaado muwaadiniinteenna".
Siduu muranka u saameeyay ol'olaha doorashada Hindiya?
Wax yar ka dib markii ay soo baxday natiijada codeynta Qaramada Midoobay, ayuu hoggaamiyaha mucaaradka Hindiya Rahul Gandhi bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in ra'iisul wasaare Narendra Modi uu "daciif" yahay.
Waxaa iska caddeyd in uu Mr Gandhi isku dayayay inuu loollan galiyo fikradda laga aaminsan yahay Mr Modi oo ah inuu yahay ninka ugu awoodda badan Hindiya ee ka qeyb galaya doorashada guud.
Maxay tahay kooxda Jayshu Muxammad?
Magaca Jayshu Muxammad micnihiisa tooska ah waa Ciidankii Muxammad.
Wadaadka uu fadhigiisu yahay dalka Pakistan ee lagu magacaabo Masood Azhar ayaa aasaasay kooxdan ka dib markii Hindiya laga soo daayay sannadkii 1999-kii.
Weerarkii ismiidaaminta ahaa ee laga fuliyay Kashmiir ayaa xoojiyay xiisadda labada dal
Wuxuu xilligaas ka mid ahaa saddex nin oo loo soo daayay si loogu baddasho rakaab iyo shaqaale la socday diyaarad ay Hindiya leedahay oo la afduubtay ka dibna loo duuliyay dhulkii ay markaas maamulayeen kooxda Daalibaan ee dalka Afqaanistaan.
Waxaa lagu soo warramay in Masood Azhar waqtigii uu Afqaanistaan ku sugnaa uu la kulmay hoggaamiyihii Daalibaan Mullah Cumar iyo hoggaamiyihii Al-Qaacida Usaama Bin Laadin.
Hindiya ayaa kooxda Jayshu Muxammad ku eedeysay inay ka dambeysay weerar bishii Disembar ee sannadkii 2001-dii lagu qaaday xarunta baarlamaanka ee magaalada Delhi, inkastoo kooxdu ay eedeyntaas beenisay.
Weerarkaas kadib waxaa kooxdan laga mamnuucay gudaha dalka Pakistan, hase ahaatee wali way sii howl galeysay iyadoo mararka qaar adeegsaneysay magacyo kale.
Hindiya ayaa dowladda Pakistan ku eedeysay in ay taageero siiso kooxda Jayshu Muxammad, balse waxay kooxdan marar badan weerartay milatariga Pakistan, iyadoo xitaa sannadkii 2003-dii mar isku dayday inay disho madaxweynihii xilligaas ee Pakistan Pervez Musharraf.
Nin loo waday in la aaso oo iska soo kacay
Weerarkii laga cabsida qabay ee magaalada Maqalle oo la fasaxay